“Mohamed Salah wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto Ballon d’Or” – Gool FM
“Mohamed Salah wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto Ballon d’Or”
Dajiye November 12, 2021
(Afrika) 12 Nof 2021. Halyeyga kubadda cagta Afrika iyo xulka qaranka Zambia ee Kalusha Bwalya, ayaa u sharaxay laacibka kooxda Liverpool Mohamed Salah, inuu ku guuleysan doono abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or sanadkan.
Kalusha Bwalya ayaa u sheegay OnTime Sports, in Mohamed Salah uu yahay kan ugu fiican adduunka waqtigan, sababa la xiriira heerarkiisa farsamo iyo jir ahaaneed ee cajiibka ah.
“Qaabka Salah, goolashiisa gaarka ah, iyo saameynta uu ku leeyahay Liverpool, waxaas oo dhan waxay u sharaxayaan inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu sareysa adduunka, isla markaana uu ku guuleysto abaalmarintan.”
“Salah waxa uu ku sugan yahay xaalad isqabqabsi ah isaga iyo tababarihiisa Jurgen Klopp, iyo sidoo kale saaxiibadiisa, gaar ahaan Sadio Mane.”
Si kastaba ha noqotee, Bwalya ayaa xaqiijiyay in xulka qaranka Massar uu yahay musharax ugu xoogan ee u soo bixi kara koobka adduunka 2022, isagoo ku macneeyay in Faraaciinta ay yihiin xul cajiib ah, isla markaana heysta xidig weyn oo sida Salah ah, marka laga reebo joogitaanka macalinka rug cadaa ah ee Carlos Queiroz.
“Xavi kuma dhibtoon doono Barcelona” – Andrés Iniesta
“Real Madrid ayaa ugu cad-cad hanashada Champions League” – Iker Casillas